Cristiano Ronaldo oo wiilkiisa curadka ah u dhigay cashar uusan ilaabi doonin! – Gool FM
Cristiano Ronaldo oo wiilkiisa curadka ah u dhigay cashar uusan ilaabi doonin!
(Yurub) 20 Agoosto 2019. Xiddiga reer reer Portugal iyo kooxda Juventus ee Cristiano Ronaldo ayaa ka hadlay faahfaahin ku saabsan inuu u dhigay cashir uusan ilaabi doonin wiilkiisa curudka ah ee Ronaldo Jr.
Ronaldo ayaa sheegay in talaabadan uu qaaday uu ku doonayay si wiilkiisa curudka ah ee Ronaldo Jr uu u barto duruufihii uu aabihiis ku noolaa markii uu yaraa ilaa iyo qaangaanimadiisa, kahor inta uusan noqon mid hodan ah.
Cristiano ayaa wareysi uu ku bixiyay “” TVI” ee dalka Portugal wxuu kaga hadlay noloshii uu soo maray kahor inta uusan hodan noqonin:
“Caruurtayda waligood kuma noolaan duruufo la mid ah sidii aan horey ugu noolaa, Waxaan bilaabay inaan ku tashado naftayda illaa iyo markii aan ahaa 12-sano jir”.
“Waxaan ka tagay magaaladaydii Madeira waxaana u dhaqaaqay Lisbon, si aan u tijaabiyo nasiibkeyga kubadda cagta, waxaan kula noolaa maalmahaas saaxiibkeey ii dhow Miguel Paixão guri uu ku noolaa ee iska liita”.
“Waxaan xiiso u qabay si aan u tusiyo wiilkeyga, qaabka iyo meesha aan ku noolaa caruurnimadeyda iyo bilawgeygii ka ciyaaryahan ahaan kubadda cagta, wexeey aheyd arrin weyn, sababtoo ah waxaan arkay isla dadkii walina waa ay joogaan, ma fileynin sidaan, wax walba waa sidoodii mana jiraan wax isbadalay, aad baan ula dhacay”.
“Marka aniga iyo wiilkayga aan gudaha u galnay qolkii aan ku noolaan jiray, si dhaqso leh ayuu ii soo eegay wuxuuna si layaab leh ii weydiiyay aabe ma halkan ayaad ku seexan jirtay?, ma aheyn mid aaminsanaa inay dhici karto arrintan oo kale”.
“Wuxuu u maleynayaa in noloshu ay fududahay, iyo sidoo kale helitaanka nolol wanaagsan, iyo lahaanshiyaha guryo, gawaari iyo dhar, si la mid ah waxyaabaha cirka ku socda, marka waxaan rabay inaan wiilkayga baro cashar”.
“Waxaan rabay inuu ogaado in kartida oo kaliya aysan ku filneyn in la guuleysto, waa inuu si adag u shaqeeyaa una adkaystaa maalmaha adag, iyo in had iyo jeer uu kalsooni ku qabo kartida uu leeyahay iyo yoolka uu doonayo inuu gaaro”.
Klopp oo sharaxaad ka bixiyay sababta layaabka lah ee ka dambeysay inay ku fashilmaan dib u soo celinta Coutinho